မြဝတီ – ကော့ကရိတ်အာရှလမ်း ကော့နွဲ့ရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန် သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ် အပျက် ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ စူးရှထက် – XB Media & News
အနုပညာနယ်ပယ်မှာ နေရာတစ်ခုကို ရပ်တည်ထားပြီး အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ မော်လ်ဒယ် စူးရှထက်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ စူးရှထက်ဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့သလို ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်း အားတက်သရော လုပ်ဆောင်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရှာဖွေ စုဆောင်းထားတဲ့ ချွေးနှဲစာလေးတွေနဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ပြည်သူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အလှူအတန်းတွေ အမြဲပြုလုပ် လှူဒါန်းပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားလည်း ကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်သလို မိဘကိုလည်း ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်လေးစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ စူးရှထက်က ထိတ်လန့်စရာ ဖြစ်ရပ်လေး ကြုံခဲ့ရတာကို ဖော်ပြ လာတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ ယနေ့မနက်ပိုင်း မြဝတီ – ကော့ကရိတ်အာရှလမ်း ကော့နွဲ့ရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ယာယီပိတ်ထားခဲ့တဲ့ ခရီးသွားယာဥ်တွေထဲမှာ စူးရှထက်တို့လည်း ပါဝင် ပိတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ စူးရှထက်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာတော့ “အာရှလမ်း ကော့ကရိတ် အထွက် တိုက်ပွဲဖြစ်တာ…. အိုးးးလက်နက်ကြီးတွေကျတာ လေဗွေတွေပါမြင်နေရတယ်….အုန်း အုန်း အုန်းနဲ့ ပိတ်မိ ” ဆိုပြီး သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုတွေ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းအရင်းအမြစ်៖ Source – Zar Chi Htay
အႏုပညာနယ္ပယ္မွာ ေနရာတစ္ခုကို ရပ္တည္ထားၿပီး အေကာင္းဆုံးေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ေမာ္လ္ဒယ္ စူးရွထက္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈေတြကိုလည္း အျပည့္အဝရရွိထားခဲ့ပါတယ္။ စူးရွထက္ဟာ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလမွာလည္း ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ တစ္သားတည္းရပ္တည္ခဲ့သလို ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြလည္း အားတက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရွာေဖြ စုေဆာင္းထားတဲ့ ေခြၽးႏွဲစာေလးေတြနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အလႉအတန္းေတြ အၿမဲျပဳလုပ္ လႉဒါန္းေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားလည္း ကိုင္းရႈိင္းသူျဖစ္သလို မိဘကိုလည္း ေကြၽးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္ခင္ေလးစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ စူးရွထက္က ထိတ္လန႔္စရာ ျဖစ္ရပ္ေလး ႀကဳံခဲ့ရတာကို ေဖာ္ျပ လာတာေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ယေန႔မနက္ပိုင္း ျမဝတီ – ေကာ့ကရိတ္အာရွလမ္း ေကာ့ႏြဲ႕႐ြာအနီးမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ထားခဲ့တဲ့ ခရီးသြားယာဥ္ေတြထဲမွာ စူးရွထက္တို႔လည္း ပါဝင္ ပိတ္မိသြားခဲ့ပါတယ္။ စူးရွထက္ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္မွာေတာ့ “အာရွလမ္း ေကာ့ကရိတ္ အထြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္တာ…. အိုးးးလက္နက္ႀကီးေတြက်တာ ေလေဗြေတြပါျမင္ေနရတယ္….အုန္း အုန္း အုန္းနဲ႔ ပိတ္မိ ” ဆိုၿပီး သူမႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာကိုေတြ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္းအရင္းအျမစ္៖ Source – Zar Chi Htay
Pre-wedding ပုံတွေကို copyထားတယ်လိုဝေဖန် ခံရတဲ့အပေါ် liveလွှင့်ပြီးပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ တိုရဲ့videoဖိုင်